Dheeraadka Dheeraadka ah: Ka dalbashada Khatartaada Dhameystiran ee Keto - Lacag Dib u Furan
Home » Freebies » Dheeraadka Dheeriga ah: Ka dalbashada Khatartaada Dhalinta ee Keto
Marka jirkaagu ku jiro ketosis, wuxuu gubanayaa unugyada dufanka tamarta halkii ay ka ahaan lahaayeen carbs. Iyada oo la adeegsanayo Keto Advanced, waad ka caawin kartaa bilaabista hawshan!
Xitaa wanaajin wacan ... .Waxaad heli kartaa dhalo of Keto oo tijaabi RISK BILAASH AH !!!
Keto Advanced waa kaalmo dheellitiran oo awood leh oo ketosis ah oo ka caawin doona miisaanka luminta, ka caawiyo inuu gubo xayawaanka caloosha, iyo taageerid dheefshiidka iyo hurdada. Waa kuwan adiga oo khibrad u leh gunnadan Keto:
Yaraynta Jirka ee Fatahaada Meelaha Dagaalka ah
Waxaad Heli Baahisaa Ketosis!
Waxaad u gubi doontaa Fataha Tamarta haddii aadan ogeyn Jitters
Caafimaadka Maskaxda ee Wanaagsan!
Soo kabashada degdegga ah ee jimicsiga!
iyo Adiga Xitaa Inaad Joogto Murqaha Yaryar!
Ku biir kumanaan malyan oo miisaanka ku dhuftay ketosis! Ku daadi dufanka tamarta halkii aad ka bixin lahayd carbeed iyo inaad dareentid tamarta sare ee ketosis ku siiso! Riix Halkan si aad u hesho dhaladaada lacag la'aan ah
Fadlan Xusuusnow: Halista Keto dhalada ah ee bilaashka ah waxaa la isticmaali karaa oo keliya haddii aad ku sugan tahay Mareykanka iyo Kanada.
Haddii aad ku sugan tahay Yurub ka hubi halistan halista ah ee dhalada keto bixiya